तपाइँको AirPods, AirPods Pro, AirPods Max र EarPods कसरी सफा गर्ने | म म्याक बाट हुँ
तपाइँको AirPods, AirPods Pro, AirPods Max र EarPods कसरी सफा गर्ने
यो हामी सबैलाई हुन्छ। हामीले हाम्रो प्यारो र महँगो एयरपडहरू पहिलो पटक डेब्यु गर्यौं, त्योसँगै आणविक लक्ष्य प्रतिष्ठित एप्पल हेडफोनहरू, हामीले तिनीहरूलाई परीक्षण गर्‍यौं, हामीले देख्यौं कि तिनीहरू धेरै राम्ररी सुन्छन्, कि तिनीहरू हाम्रो कानमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन् (वा होइन) र तिनीहरूको लागि हामीले भर्खरै तिरेको मूल्यको हो।
र जब तपाइँ तिनीहरूलाई चार्जिङ केसमा राख्नको लागि तपाइँको कानबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ: डरलाग्दो! तिनीहरूले दाग पाएका छन्। सेरा कान देखि! यदि कसैले तपाईंलाई देख्यो भने तपाईं बायाँ र दायाँ हेर्नुहुन्छ, तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो औंलाहरूले तुरुन्तै पुछ्नुहुन्छ, र तपाईंले तिनीहरूलाई टाढा राख्नुहुन्छ, एक क्षणको लागि सोच्नुहोस् कि तपाईं सम्पूर्ण ग्रहमा एक मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको कानमा मोम छ ...
सबै मानव जातिहरू, धेरै वा थोरै हदसम्म, हामी मोम स्राव गर्छौं हाम्रो कानमा। उनीहरुको संरक्षण गर्नु जरुरी छ । यस मोममा विशेष रसायनहरू हुन्छन् जसले संक्रमणसँग लड्छ जसले कानको नहर भित्रको छालालाई हानि पुर्‍याउन सक्छ। यसले बाहिरी संसार र कानको पर्दाको बीचमा सुरक्षा कवचको रूपमा काम गर्छ।
र त्यो हो जब हामी प्रकृति विरुद्ध कार्य गर्छौं, र लामो समयको लागि हाम्रो कानको प्वालमा सेतो प्लास्टिकबाट बनेको अनौठो तत्व राख्छौं: AirPods। खैर, अपरिहार्य हुन्छ। या त तपाईंले आफ्नो हेडफोनहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुँदा आफ्नो कानको भित्री भाग राम्ररी सफा गर्नुहोस्, जुन कसैले गर्दैन, वा तपाईंले अनिवार्य रूपमा तिनीहरूलाई मैनले गर्भाधान गर्नुहुनेछ।
र यदि दिनहरू बित्दै जान्छ, र भीडमा, तपाइँलाई याद छैन वा तपाइँसँग प्रत्येक पटक तिनीहरूलाई तपाइँको कानबाट हटाउने समय छैन, अन्तमा तपाइँ स्पष्टता संग तपाइँको मनपर्ने संगीत सुन्न छोड्नुहुनेछ। पहिलो दिन को। र यो होइन कि तपाईं बहिरा हुँदै हुनुहुन्छ, न त तपाईंले तिनीहरूलाई क्षति पुर्याउनुभएको छ, यो तपाईं मात्र हो यो तिनीहरूलाई सफा गर्ने समय हो। तिनीहरूलाई हानि नगरी यो कसरी गर्ने हेरौं।
AirPods र AirPods Pro को आधिकारिक पानी प्रतिरोध केवल पसिना र स्प्ल्याश हो। त्यो तपाईलाई थाहा छ।
1 एप्पलले तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ
2 अनि के नगर्ने
3 हाम्रो सिफारिस
4 चार्जिङ केस पनि सफा गर्नुहोस्
एप्पलले तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ
एप्पलले आफ्नो वेबसाइटमा ए समर्थन पृष्ठ जहाँ यसले तपाईको हेडफोन सफा गर्दा तपाईले के गर्नु पर्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर सिफारिस गर्दछ। हामी तपाइँको सारांश बनाउन जाँदैछौं संकेत.
आन्तरिक AirPods शेलको सेतो प्लास्टिक, र यसको चार्जिंग केसको लागि, तपाइँ भिजाइएको वाइप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एथिल रक्सी १००% सम्म।
यदि होइन भने, कपडाले भिजेको मात्र हो पानी, र तिनीहरूलाई अर्को लिन्ट-रहित कपडाले सुकाउनुहोस्।
AirPods Max को लागि, बगिरहेको पानीले अलिकति भिजेको कपडा प्रयोग गर्नुहोस् र नरम, सुख्खा, लिन्ट-रहित कपडाले सुकाउनुहोस्।
कान प्याड सफा गर्न एयरपड्स अधिकतम, तिनीहरूलाई हेडफोनबाट हटाउनुहोस् र एक गिलास पानीमा5मिली लिक्विड लुन्ड्री डिटर्जेन्टको घोलमा कपडा भिजाउनुहोस्। तिनीहरूलाई धुनुहोस् र राम्रोसँग सुकाउनुहोस्।
माइक्रोफोन र स्पिकर ग्रिलहरू कपासको स्वाबले सफा गर्नुहोस् सेको.
कनेक्टर मलबे हटाउनुहोस् बिजुली सफा, सुख्खा, नरम ब्रिस्टल ब्रशको साथ।
AirPods Pro बाट रबरहरू लिनुहोस् र तिनीहरूलाई ट्याप मुनि चलाउनुहोस्। केवल पानी संग। तिनीहरूलाई फिर्ता राख्नु अघि तिनीहरूलाई राम्रोसँग सुकाउनुहोस्।
अनि के नगर्ने
सफा गर्न अल्कोहल वाइपहरू प्रयोग नगर्नुहोस् ग्रिडहरू AirPods स्पिकरहरूबाट।
समावेश उत्पादनहरू प्रयोग नगर्नुहोस् ब्लीच न त हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
ओपनिङहरू भिजाउनबाट बच्नुहोस्। कि कुनै पनि तरल तिनीहरू मार्फत प्रवेश गर्दैन।
AirPods वा AirPods Pro लाई डुब्न नदिनुहोस् पानीमुनि.
AirPods Max नराख्नुहोस् ट्याप मुनि.
तिनीहरू पूर्ण रूपमा सुख्खा नभएसम्म तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्।
लोडिङ पोर्टहरूमा केहि पनि नराख्नुहोस्।
तपाईंको एयरपडहरू पानी मुनि राख्ने बारे सोच्नुहोस्। पागल YouTubers को लागि यी परीक्षणहरू छोड्नुहोस्।
एप्पलले हामीलाई व्याख्या गरेको यो सबै सिद्धान्त जान्न धेरै राम्रो छ, ताकि कुनै गल्ती नगर्नुहोस्, तर हामी हाम्रो एप्पल हेडफोनलाई कसरी सही अवस्थामा राख्ने भनेर थप व्यावहारिक तरिकामा व्याख्या गर्न जाँदैछौं।
यसका लागी केस AirPods को सेतो बाहिरी भाग, तपाईं सुक्खा कपडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, वा पानी वा अल्कोहल संग धेरै हल्का ओसिलो। स्पिकर ग्रिललाई भिजाउनबाट जोगिन, तिनीहरूलाई तुरुन्तै रगड्नुहोस् र सुकाउनुहोस्, किनकि यदि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो र यसमा मैन जम्मा भएको छ भने, यसले पेस्ट बनाउन सक्छ र ग्रिलको साना प्वालहरूमा जम्मा हुन सक्छ, जसले गर्दा उपद्रव हुन्छ।
भनिएको ग्रिल सफा गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका सधैं यसलाई भित्र गर्न हो सेको। सुक्खा टूथब्रश जोड्नुहोस् र र्याक स्क्र्याप गर्नुहोस्। यसले सुक्खा मोमको साना कणहरू पप आउट गर्नेछ, र तपाईंले यसलाई सफा छोड्नुहुनेछ। यदि तपाईंले यसलाई भिजाउनुभयो भने, तपाईंलाई समस्या हुनेछ। तपाईं पनि ठेठ "Bluetac" पोटीन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सुख्खा मोम यसमा टाँसिनेछ, र ग्रिड धेरै सफा हुनेछ।
यसका लागी गममीहरू AirPods Pro को, तिनीहरूलाई हटाउनुहोस् र पानीको साथ ट्याप मुनि चलाउनुहोस्। तिनीहरूलाई धेरै राम्ररी सुकाउनुहोस्, र तिनीहरूलाई फिर्ता राख्नुहोस्। र तयार। AirPods Max कान प्याडहरूको लागि, यससँग खेलहरू नखेल्नुहोस् र Apple को निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई अलग गर्नुहोस् र एक गिलास पानीमा एक चम्चा तरल लुगा धुने साबुनले ओसिलो कपडाले पुछ्नुहोस्। तिनीहरूलाई धेरै राम्रोसँग सुकाउनुहोस् र यो हो।
यो तपाईले आफ्नो AirPods सफा गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ: एक कपास स्वाब र एक टूथब्रश।
चार्जिङ केस पनि सफा गर्नुहोस्
El चार्जिंग केस अलग उल्लेख योग्य। संसारको कुनै पनि चीजको लागि यसलाई भिजाउनु हुँदैन, विशेष गरी तरल पदार्थ यसमा प्रवेश गर्नबाट बच्न। धेरैमा, बाहिर, तपाईले एयरपड्सको प्लास्टिकको साथ गर्नुभयो। र भित्र, यसलाई कपास स्वाबले सफा गर्नुहोस्।
एयरपडहरू राखिएका प्वालहरूमा तपाईंले के राख्नुहुन्छ धेरै सावधान रहनुहोस्। पृष्ठभूमिमा, त्यहाँ छ दुई कनेक्टरहरू जो AirPods ब्याट्रीहरूमा चार्जिंग करेन्ट पास गर्न जिम्मेवार छन्। तपाईंले बुझ्नुभएको रूपमा, तिनीहरू सधैं सफा हुनुपर्छ, ताकि तिनीहरूले राम्रो सम्पर्क बनाउँछन्, अन्यथा, तिनीहरूले चार्ज नगर्न सक्छन्। यदि तपाईंले तिनीहरूलाई फोहोर देख्नुभयो भने, काठको टुथपिक वा सुक्खा कपास स्वाब प्रयोग गर्नुहोस्।
अर्को महत्वपूर्ण बिन्दु पोर्ट हो बिजुली। यदि तपाइँ सामान्यतया आफ्नो खल्तीमा चार्जिङ केस बोक्नुहुन्छ भने, लिन्ट तपाइँको कपडाको पोर्ट भित्र जम्मा हुन सक्छ। यसले चोट गर्दैन कि तपाईले समय-समयमा काठको टुथपिकलाई धेरै सावधानीपूर्वक उक्त फ्लफ हटाउनको लागि राख्नुहुन्छ। धातुको कुनै पनि लुगा कहिल्यै नलगाउनुहोस्।
यी साना टिप्सहरु संग तपाईले आफ्नो AirPods लाई पूर्ण पत्रिका स्थिति मा राख्न सक्नुहुन्छ। यो अविश्वसनीय देखिन्छ कि तिनीहरू कसरी फोहोर हुन्छन् यदि तपाइँ तिनीहरूलाई धेरै बारम्बार प्रयोग गर्नुहुन्छ, या त कान मोमको कारणले, वा कारणले गर्दा। फ्लफ खल्तीबाट लुगा।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक कम्प्युटरहरू » Accesorios » तपाइँको AirPods, AirPods Pro, AirPods Max र EarPods कसरी सफा गर्ने
आशंका पुष्टि भएको छ। M2021 Max संगको नयाँ 1 MacBook Pro 2019 Mac Pro भन्दा छिटो छ